Playmob - သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
ဆက်သွယ်ရန် - ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - တိုင်ကြားခြင်း
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သုံးစွဲနိုင်သော mm.playmob.tv ဒူဘိုင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ, ကုမ္ပဏီ Playmob DWC LLC ကပိုင်ဆိုင်သည် - သူ၏ဌာနချုပ်ဒူဘိုင်းတောင်ပိုင်းစီးပွားရေးစင်တာတည်ရှိရာယူအေအီး,
အသုံးပြုမှု (လျှော့ "သတ်မှတ်ချက်များကို") ၏အောက်ပါဝေါဟာရများ (access လုပ်နိုင်) နှင့်ဝင်ရောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုဖို့အကောင့်တစ်ခုဖြစ်စေမသောက်ဘ်ဆိုက်၏သုံးစွဲသူများအောက်ရှိအခြေအနေများသတ်မှတ်ရည်ရွယ်နေကြပါတယ် အောက်ပါ URL: mm.playmob.tv ပေါ်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာ, tools တွေ, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိနိုင် Playmob (လျှော့ "ဝက်ဘ်ဆိုက်" အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ၏သီးသန့်အိမ်ခြံမြေနေသော Playmob ၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာက်ဘ်ဆိုက်ကဆိုပါတယ်။
Playmob site ပေါ်တွင်တစ်ဦးဗားရှင်းအသစ်ကိုပို့စ်တင်နေဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် access ကိုအသစ်သောအခြေအနေများ၏လက်ခံမှုရှိပါသည်။
အကောင့်ဖန်တီးမှုပေးထားသောအချက်အလက်များတိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံနှင့်လက်ရှိဖြစ်ရပါမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, login, အီးမေးလ်လိပ်စာများ, etc မည်သည့်လမ်းအတွက်တတိယပါတီများရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိခိုက်မပြုရပါ။
အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ဖို့, အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူအမည် / login နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်။
အဆိုပါ username နှင့် password ကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူထုတ်ဖော်နှင့် / သို့မဟုတ်တတိယပါတီသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးကိုလိုအပ်သောအစီအမံယူဖို့မသဘောတူပါတယ်။
အရွယ်မရောက်သေးသူအားလုံးကိစ္စများတွင်အရွယ်မရောက်သေးသူအားဖြင့်ကျူးလွန်သောဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလုပ်ရပ်များနှင့်သူတို့ကိုင်ရသောအဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ယူကျန်ကြွင်းသောသူတို့၏မိဘများသို့မဟုတ်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အခွင့်အာဏာ, သူတို့အားဖြင့်ဆိုက်ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်န်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်အကျိုးဆက်များ။ အရွယ်မရောက်သေးသူဂရုတစိုက်ဤသတ်မှတ်ချက်များ / စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Playmob, အကောင့်၏ဖန်တီးမှုငြင်းဆန် disable နှင့် / သို့မဟုတ်အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မကဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. Playmob နေဖြင့်စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုအလိုအလျှောက်လုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာအဘယ်သူ၏တစ်ဦးတည်းသော function ကို (စသည်တို့ကိုအညွှန်း၏ URL ကို, အိုင်ပီလိပ်စာ, အချိန်နှင့်ရက်စွဲ,) အသုံးပြုသူကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် "cookies များကို" အလိုအလြောကျသင် site ကိုမှချိတ်ဆက်၏တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိတစ်ဦးချင်းစီအချိန်စုဆောင်းနေကြသည်ကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြပါသည် enable, မြှင့်တင်ရန်ဒါမှမဟုတ် website နှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်လှမ်းမီနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူချောမွေ့။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်ညွှန်ပြသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအောက်ပါပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုသည်ဤအမှု၌ပြောင်းလဲသွားနိုင်လက်ထက်ရှင်းပါတယ်။
စုဆောင်း personal data ဝက်ဘ်ဆိုက်တိုးတက်စေရန်နှင့်သုံးစွဲသူများများအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, အကြောင်းအရာနှင့် website ကို tool များ၏အများဆုံးစေနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်, အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လိုအပ်သောများမှာ တိကျတဲ့။ သူတို့ကအစဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များနှင့်လျှောက်လွှာအပေါ်ကြော်ငြာတွေပစ်မှတ်ထားဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, နှင့်အသုံးပြုသူများအများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အသုံးပြုမှု လိုက်. ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ရန်။
စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လက်ခံရရှိသူသာ Playmob ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က, သို့သော်, တစ်ဦးအရည်အချင်းအခွင့်အာဏာမဆိုဥပဒေ, စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းဆုံးဖြတ်ချက်အောက်မှာတတိယပါတီများမှမှထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။
Playmob သူတို့ကိုအကြောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးကိုလိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူ, သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များဆန့်ကျင်, မှုများလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
စုဆောင်း personal data အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်တင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောအချိန်များအတွက် Playmob ကိုသိုထားလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူများသည် access ကို, ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, အတိုက်အခံနဲ့သူတို့ကိုအကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏ဆုတ်ခွာရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သူတို့ကအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ tech@playmob.tv
အသုံးပြုသူ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိ / ရရှိသောပြီးလျှင်မှဘာသာရပ်, Playmob ဆက်စပ်သို့မဟုတ်မ, ဈေးကွက်စစ်ဆင်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသနှင့်စီးပွားရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်၎င်း၏မိတ်ဖက်ကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ website နှင့်က related အပေါငျးတို့သ element တွေနဲ့ content, ထောက်ပံ့သို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုသမျှတစုံတမျိုး၌၎င်း, ဤစာရင်းတွင်မရှိဘဲကန့်သတ်, အကြောင်းအရာ, applications များ, ကိရိယာများ, ဝန်ဆောင်မှုများ, စာသား, ရုပ်ပုံများ, အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခြင်း, အမှတ်တံဆိပ် , နာမည်များ, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်နည်းပညာကိရိယာများ, databases ကိုများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုမူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ကာကွယ်ထားနှင့်ဤဧရိယာအတွက်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ (လျှော့စုပေါင်း "အကြောင်းအရာ") မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြ၏။
ယေဘုယျအားဖြင့် Playmob မှဘာသာရပ်အသုံးပြုသူများ (ထို website တွင်အကြောင်းအရာပြသ မှလွဲ. ) ကိုအခမဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး non-သီးသန့်, Non-လွှဲပြောင်းပေးအပ် ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူလက်ခံမှုနှင့်လိုက်နာမှု။
Playmob သာ streaming အသုံးပြုသူများ Playmob ၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိမှာ website တွင်ပေးအပ်နိုင်ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုလျက်နှင့်မသီးသန့်သီးသန့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဘို့, Web site မှ, tools တွေသုံးပြီး Playmob ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူလက်ခံမှုနှင့်လိုက်နာမှုဖို့ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားအခြေအနေများနှင့်ဘာသာရပ်အောက်မှာထောက်ပံ့။
ဒါဟာအသုံးပြုသူ (ဈ) မဟုတျကွောငျးနားလည်ယေဘုယျအားဖြင့်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပစ္စည်းတွေ (ii) ရက်နေ့မှာအပြီးအပိုင်, (s) ကိုအကြောင်းအရာ (s) ကိုဗီဒီယို (များ), မြေတပြင်လုံး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပူးတွဲပါဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ် (ထို website တွင်ပေးအပ်နိုင်ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအပါအဝင်) အကြောင်းအရာ။
မဆိုသုံးစွဲခြင်း, မျိုးပွား, ပြုပြင်မွမ်းမံဖျက်မှု, လိုက်လျော, ဒေါင်းလုပ်, ကူးယူ, ပြုပြင်မွမ်းမံ, ဖြန့်ဖြူး, ဂီယာ, ဘာသာပြန်ချက်, ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း, ငှားရမ်းခြင်းတစုံတမျိုး၌, မြေတပြင်လုံး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်, အထူးသဖြင့်, ထိုအကြောင်းအရာ decompile သို့မဟုတ်မည်သည့်အလတ်စားအတွက်တင်းကြပ်စွာ Playmob သို့မဟုတ်၎င်း၏လိုင်စင်ရ၏ express ကိုစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတားမြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သို့မဟုတ်အင်အားသုံး majeure ၏အမှု၌စီစဉ်ထားပြတ်တောက်, မှလွဲ. 24 နာရီ 24,7ရက်7ထဲကရရှိနိုင်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် Playmob ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဝန်ဆောင်မှုတာဝန်မရှိဘဲ, မဆိုပုံစံ၏အာမခံခြင်းမရှိဘဲ, "ကက" ပေးထားပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် Playmob ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတာဝန်ဝတ္တရားခြင်းမရှိဘဲ, မည်သည့်မျိုးအာမခံခြင်းမရှိဘဲ "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ထောက်ပံ့ပေးသည်။
အဆိုပါအသုံးပြုသူတတိယ MOBIBASE ၏အခွင့်အရေးများဒါမှမဟုတ်တချို့နှင့်ငြိစွန်းမသမျှတစုံတမျိုးအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာဆီးတားဖို့မဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုဝင်ရောက်ဖို့သဘောတူ ပညတ္တိကျမ်းနှင့်စည်းမျဉ်းအဖြစ်အများပြည်သူအမိန့်များနှင့်စာရိတ္တကိုချိုးဖျက်ဖို့မဟုတ်ဘူးထုံးစံ။
အထူးသဖြင့်, အသုံးပြုသူအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသုံးပြုခြင်းနှင့် Access ၏အခြေအနေတွင်, မိတ်ဆွေအနေဖြင့်သဘောတူပါသည်:
-ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ MOBIBASE သို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှချိုးဖောက်;
-ဝါဒဖြန့်, နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေး ;
-လှုံ့ဆော်အကြမ်းဖက်မှုများ, လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု;
-နည်းပညာ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်များကိုကျော်လွှားကျူးလွန်သို့မဟုတ်ပင်လယ်ဓားပြများ၏လုပ်ရပ်များတွင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်း, ဗိုင်းရပ်စ် transmit, နှောက်ယှက်, website ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမဆို tool ကိုဖကျဆြီးခွငျးသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်, ဆော့ဖ်ဝဲ, ဟာ့ဒ်ဝဲ;
-ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရန် Playmob ၏ပုံသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုကိုထိခိုက်စေတယ်။
-ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသူအခြားသူများကိုလေးစားရန်နှင့်ထို site ကို အသုံးပြုရာတွင်တိုင်ကြားရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
a- Playmob ယင်း၏စည်းမျဉ်းတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအခြေအနေတွင်၎င်း၏စာချုပ်တာဝန်ဝတ္တရား၏သင့်လျောသောစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
သေဒဏ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ် Subscription စာချုပ်များ၏မကောင်းတဲ့ကွပ်မျက် icts တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဖောက်သည်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်တတိယပါတီများ၏ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းနှင့်ကျော်လွှားဆိုတဲ့အချက်ကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်သေတ္တာပေးရန်ဖြစ်စေ attribute ဖြစ်ပါတယ်သို့ရာတွင် အကယ်. Playmob ၏တာဝန်မဟုတ်ပါ.
သို့သော် Playmob ၏တာဝန်စာရင်းသွင်းထားသောစာချုပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမိမိအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းနှင့်ကျော်လွှားသုံးပုံတစ်ပုံမှဖြစ်စေ attribute ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါလျှင်စေ့စပ်, ဒါမှမဟုတ်မရ တစ်ဦးအင်အားသုံး majeure ။ အင်အားသုံး majeure ။
-ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် Playmob ဝန်ဆောင်မှုများ၏ထောက်ပံ့ရေးအတွက်ကြားဖြတ်;
-၎င်း၏၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဟဇာတမမှမဆိုမြေတပြင်လုံး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ဖောက်သည်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ရာမှရရှိလာတဲ့ဝန်ဆောင်မှု Playmob (ဈ) ကနေတဆင့်တတိယပါတီပျက်စီးမှု, သို့မဟုတ် (ii) Playmob ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများ,
-ပျောက်ဆုံး, အရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏အမှု၌အဆိပ်ကမ်းဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကွန်ရက်၏ချွတ်ယွင်းမှုအတွက်လျှောက်လွှာကို install လုပ်ဖို့အတွက်မဆိုအခက်အခဲ (ii), (iii), ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အပါအဝင် Playmob Service ကိုအသုံးပြုပါ။
b- ဖောက်သည်ကတာဝန်ယူနှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုနှင့်အတူ၎င်း၏အလွဲသုံးစားလုပ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်, လျှောက်လွှာနှင့် / သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် Non-လိုက်နာမှုမှပေါ်ပေါက်သောအရာမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်ကုစားဘို့ Playmob indemnify ရန်သဘောတူ။
VIII- ဆက်သွယ်ရန် - ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - တိုင်ကြားခြင်း
ဖောက်သည် Playmob, e-mail, ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ tech@playmob.tv
စာရင်းသွင်းထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအတွက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုအဘို့, ဖောက်သည်မှာက e-mail ဖြင့် Playmob ဆက်သွယ်နိုင်သည် tech@playmob.tv
မည်သည့်ဥပဒေရေးရာအရေးယူကုမ္ပဏီ၏ Ombudsman (အခမဲ့ addressing အပါအဝင် Playmob လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အားလုံးသဘောကျဖြေရှင်းချက်ရှာမတိုင်မီ Playmob ၏အသုံးပြုမှုအတွက်အခက်အခဲ၏အမှု၌, စာရင်းပေးသွင်းထားသူ, ထို option ရှိပါတယ် စားသုံးသူ) ။
© Playmob - သီးသန့် | 2021
သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ | မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ | Contact us